Podcasting Inoenderera Kukura Mukurumbira uye Kuita Mari | Martech Zone
Podcasting Inoenderera Kukura Mukurumbira uye Kuita Mari
Chitatu, September 12, 2018 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Isu tine angangoita mamirioni mana kurodha pasi mazana maviri+ ezvikamu zvedu kushambadzira podcast kusvika nhasi, uye iri kuramba ichikura. Zvakawanda zvekuti takaisa mari yedu podcast studio. Ini ndiri chaizvo mumatanho ekugadzira e itsva studio yekuti ini ndinogona kunge ndichienda kumba kwangu sezvo ini ndichizviwana ndiri kutora chikamu kana kumhanyisa akawanda ma podcast.
Kubva pakutanga kwayo kwakazvininipisa muna 2003, podcasting rave simba risingamisike mukutengesa zvemukati uye risingaratidze zviratidzo zvekumira - huwandu hwepodcasts hunoshanda hwakwira kubvira 2008. Jon Nastor
2018 Podcasts Statistics
Podcast vateereri teerera kune avhareji yeanomwe anoratidza pavhiki, iri kumusoro 7% kubvira 40
Kune mazana mashanu nemakumi mashanu emakumi mashanu emitambo anoshanda mumitauro inopfuura zana nemamirioni 550,000 emitambo anowanikwa online
Iwo epamusoro mashanu marudzi epodcasting ndeenzanga & tsika, bhizinesi, komedhi, nhau & zvematongerwo enyika, uye hutano
64% yevagari vemuUS vanoziva izwi iri podcasting
44% yevagari vemuUS vakateerera podcast, 26% inoteerera podcast mwedzi wega, 17% vhiki nevhiki, iine 6% vanofarira mafeni.
Iyo yakakosha huwandu hwevanhu veepodcast ndeye 25-34 vane makore ekuberekwa, kazhinji akaoma huwandu hwevanhu kusvika nekushambadzira
Podcast vateereri vane 45% vangangove vane degree rekukoreji uye 37% vangangoita mari yegore rose ye $ 100,000 kana kupfuura
Chii chiri Kuchinja kuti maPodcast Akakurumbira?
Reverse makore mashoma uye kudya podcasts raive rakaoma basa. Dai iwe uine iOS chishandiso, iwe unofanirwa kumira uye kuwiriranisa chishandiso chako neTunes mushure mekunyorera kumaPodcast aunoda. Nekudaro, sezvo zvishandiso zvave zvemberi uye zvebandband kubatana zvazove zvakajairika, kumhanyira podcasts rave rajairwa. Apple ine iyo podcasts app, uye kune zvakare Stitcher, TuneIn, BlogTalkRadio, uye nhare mbozha dzinogona kusanganisa vatambi zviri nyore.
Kunze kwekuteerera mukati memangwanani ako emangwanani kana masikati bhasikoro kukwira, iko kusasunganidzwa kwema-smartphones nemotokari zvakagadzira podcast kuteerera kune zvaunofanira kuita mangwanani ako uye masikati kuenda. Mune mawonero angu, ndinotenda iyi yave iri nzvimbo yakakura kwazvo yekukura ine bhizinesi podcasts.
Kwete chete kushandiswa kwekuchinja, saizvozvowo maitiro. Sekugara kwevanhu uye vachiona Netflix kwemaawa, tiri kuona kuti vateereri vedu vachateerera maawa epodcast yedu mukugara kamwe chete. Sanganisa izvi neyakajairwa nzvimbo yekuteerera yakajairwa mu2016 mota dzinogona kudya podcast… uye pa-kudiwa odhiyo iri kuzotora zvatisati tamboona!
Pa Kubudisa divi, podcasting iri kuve kure nyore. Yaimboda studio-inonzwika, mamaikorofoni anodhura, uye musanganisi wekurekodha… wozoipfuudza kune edhiyo edhisheni kuti tune uye tweak. Ini munguva pfupi yapfuura ndakaita mamwe mapodcast mumugwagwa ne Zoom H6 rekodhi uye seti ye Shure mamaikorofoni eS58 - uye kujekesa kwepodcasts kwaishamisa. Heck, unogona kutanga ne Anchor podcast app, uye yakanaka Bluetooth misoro inoshanda zvakanaka.
Midhiya yekushandisa iri kuratidza zviratidzo zvekushandurwa zvinoshamisa neese matekinoroji uye nema paradigms matsva. Mobile inowedzera kushandiswa se'kutanga skrini, 'pamwe nekukwira kwemamwe mafomu ezvemukati, senge mapodcast uye' zvinogoneka 'zvemukati kubva pane-inoda vhidhiyo masevhisi ari kukanganisa dzidziso yekuti kutarisisa kwedu kupfupi. Tom Webster, Mutevedzeri weMutungamiri waEdison weChirongwa
Podcasting Monetization: Zviri Kuitika
Mushure memakore akawanda kudaro epodcasting, ndiri kutora mari yakanaka kuburikidza nevamwe vatsigiri (ndatenda ShambadzaCast). Nekuti ma podcast angu anogona kuwana 10k + anoteerera pamwedzi mishoma inotevera, vashambadziri vari kubhadhara mazana emadhora emadhora pachiitiko. Izvo zvinogona kunge zvisingaite kunge zvakawanda, asi zvinoita kuti nguva yacho ive yakakosha kuronga, kurekodha, uye kutsikisa iwo maPodcast. Uye zvakasiyana nemavhidhiyo uye vhidhiyo, podcasting yakanaka pakushambadzira nekuti iwe une hanya nemuteereri. Ehezve, ini ndinoita shuwa kuti vashambadziri vangu vane chekuita uye vakakosha kune vateereri vangu zvakare - ndinofunga ndiyo kiyi. Hamungandinzwe ndichiedza kutengesa machira paangu kubvunzurudza kwekushambadzira!
Kana pasina podcasts dzakakurumbira muindasitiri yako, ino inguva yekutanga imwe! Zvese zviri kumusoro kubva pano!
Tags: 2018edison tsvakurudzoIABKushambadzira Podcastmusicoomphnielsenpacific zvemukatiPodcast zvikamupodcast yekushandisaPodcast kukurapodcast nhambaPodcast statspodcast studiopodcastingpodcasting kukurapodcasting nhambapwc
Maitiro Ekuita Izvo Zvizhinji zveDesktop Yako kune Nhare Yekutama
Zvinotora Nguva Yakareba Sei Kugara MuGoogle Kutsvaga Mhedzisiro?